रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्र बाटैमा गायब !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्र बाटैमा गायब !
काठमाडौं – रक्षा मन्त्रालयले उपरथी अनुजबहादुर बस्न्यातको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकताको छानबिन गर्ने सम्बन्धमा सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा पठाएको पत्र ९ दिनसम्म पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छैन ।
उपसचिव दुर्गादेवी गुरुङले २०७५ कात्तिक २६ मा हस्ताक्षर गरी पठाएको बस्न्यातको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा निक्र्यौल गरी सोको जानकारी दिन प्रधानसेनापतिको कार्यालय जंगी अड्डाको नाममा सम्बोधन गरेको पत्र अहिलेसम्म पुगेको छैन । सैनिक स्रोतका अनुसार उक्त पत्र उपरथी बस्न्यातले रक्षा मन्त्रालयबाटै गायव बनाएका छन् । बस्न्यातले रक्षा मन्त्रालयमै घुसपैठ गराएर आफ्नो प्रमाणपत्रको बारेमा छानबिन गर्ने पत्र रोकाएको स्रोतले बताएको छ ।
सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयको दूरी मुस्किलले पाँच सय मिटर होला । तर, पाँच सय मिटरको दूरीमा पठाएको पत्र ९ दिनसम्म नपुग्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
उपरथी बस्न्यातको आईकमको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै रक्षा सचिव विष्णु लम्साल समक्ष उजुरी परेपछि त्यसको छानबिन गरी यथार्थ विवरण पठाउन सैनिक मुख्यालयलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । उपरथी बस्न्यातले शुरुमा मोरङ स्वास्थ्य कार्यालयमा जागिर खाएका थिए ।
एसएलसी फेल भएपछि उनका बाबु राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले आफू कार्यरत स्वास्थ्य कार्यालयमा छोरा अनुजलाई जागिर लगाएका थिए । जागिरकै सिलसिलामा उनले एसएलसी पास गरे ।
त्यसपछि काठमाडौं आएर पब्लिक युथ क्याम्पस क्षेत्रपाटीमा आईकम भर्ना भए । तर, उनले आईकम पास गर्न सकेनन् । आईकमको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टमा जागिर खाए । बीचमा धर्मपालवरसिंह थापा सेनापति हुँदा उनको चाकडी गरी बस्न्यातले सेनापति हुने सपना देख्न थाले । त्यसका लागि उनको नागरिकताको उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्र बाधक हुने देखेपछि उनले पहिले लिएको नागरिकता कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि सैनिक मुख्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमडौं, किताबखाना सबैतिरबाट गायब बनाए । र, उमेर घटाएर अर्को नागरिकता लिए ।
त्यसपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०३७÷१२÷४ मा अर्को नागरिकता लिए । त्यो नागरिकताको ढड्डामा अर्कैको नाम थियो । त्यो विवरण च्यातेर आफ्नो नाम हाले । नम्बर भने त्यही नै राखे । उमेर विवाद र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादमा परेका बस्न्यात अहिले रथीमा बढुवा हुन ठूलो शक्तिका साथ लागेका छन् । सञ्चयकोषमा उनको संकेत नम्बर स्वास्थ्य कार्यालयमा जागिर खाँदाकै हो । तर, उक्त नम्बर सेनामा जागिर खाएपछिको संकेत नम्बर हो भनेर सैनिक मुख्यालयको नाममा पत्र लेख्न सञ्चयकोषका उच्च अधिकारीलाई २०७५ मंसिर २ गते पनि दिनभर धर्ना दिएर धम्की दिइरहेका थिए ।
२०३५ सालमा आईकम पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका बस्न्यातले २०७४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन गएका थिए । ३९ बर्षपछि ट्रान्सक्रिप्ट किन लिए ? यो आशंकाको बिषय छ । त्रिविमा उनले आईकम वा विकम पास गरेको कुने रेकर्ड नै नभएको थाहा भएको छ । सेनापति हुने भूत सवार भएका बस्न्यातका साढुदाई विनोज बस्नेत पनि नागरिकतामा उमेर सच्याएको फेला परेपछि जागिरबाट बर्खास्त भएका थिए । साढुभाई अनुज बस्न्यात पनि नागरिकता र उमेरकै कारण रथिमा बढुवा नहुने भएका छन् ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्रका नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरुको छानविन गरी सबैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । सेनापति थापाले उपरथी बस्न्यातबाटै प्रमाणपत्र छानबिन शुरु गर्नुपर्ने भएको छ । सेनामा रथी पद खाली भएको एक महिना बितिसकेको छ । रथीका रिक्त दुई पदमध्ये यसअघि हेमन्त कुँवरको बढुवा भइसकेको छ ।
बाँकी एक पदका लागि बस्न्यात दाबेदार हुन् । यदि उनी रथीमा बढुवा भए प्रधानसेनापतिका उम्मेदवार हुनेछन् । तर, उनको नक्कली प्रमाणपत्र र नागरिकता विवादका कारण बढुवामा विलम्व हुँदै आएको छ । सेनापति थापा निर्विवाद ढंगले रथी बढुवा गर्न चाहन्छन् । त्यसकारण केही समय ढिलो भएपनि नागरिकता र प्रमाणपत्रको बारेमा स्पष्ट भएपछि मात्र रथी बढुवा गर्ने पक्षमा उनी रहेको बताइन्छ । यदि मंसिर २२ सम्म पनि रथी बढुवा हुन सकेन भने बस्न्यात उपरथीको पदावधीले अवकाश हुनेछन् ।
उमेर र प्रमाणपत्र विवाद मात्रै होइन उनको तौलको बारेमा पनि सेनाभित्र टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । सेनामा भुडी निस्केका र अत्याधिक मोटाहरुलाई बढुवा गर्न रोक लगाइएको छ । उपरथी बस्न्यातको तौल झण्डै एक क्वीटल रहेकाले पनि उनको बढुवामा समस्या देखिन्छ ।